F -14D Tomcat + Tahiti दृश्यहरु + विमान वाहक ग्लेन USS FS2004 डाउनलोड - फ्रीवेयर
भिडियो उत्साही लागि एक शानदार विमान! एफ-14d Tomcat ध्वनि प्रभाव को बर्नर र पर्खाल पछि संग आउँछ। बाह्य दृश्य जानुहोस् र ध्वनि बाधा पारित गर्दा पनि धमाका पालन! केबल विमान वाहक बन्द कार्यात्मक छन्। यो हवाइजहाज यो प्रणाली संग 10 मीटर भित्र रोक्छ। Catapult एक निकै छोटो दूरी मा तपाईं धक्का सक्छ। F14 लागि असाधारण ध्वनि, स्वतः पायलट को गाडीको अगाडीको शिशा गर्न माथिल्लो बायाँ कुनामा छ (प्रदान आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्)।
यो हवाइजहाज आफ्नो खुशी को लागि 8 repaints उपलब्ध छ।
यो संग पनि प्रस्तुत गर्नुहोस् add-on, ताहितीको टापु र विमान वाहक यूएसएस ग्लेन।
विमानस्थलमा आईडी क्षेत्रहरू विमान वाहक प्रकार देखि बन्द लिन GLEN विन्डो देखि "विमानस्थल चयन गर्नुहोस्"
क्षेत्र विमानस्थल आईडी मा टाहिटी प्रकार मा हवाई अड्डा देखि बन्द लिन NTAA हवाई अड्डा देखि "विमानस्थल चयन गर्नुहोस्"
उड गर्न फा-14 तपाईं निर्माता चयन गर्नुपर्छ Grumman विमान सूचीबाट
दृश्यहरु को घोषणा ताहिती पुस्तकालय मा FSX स्वचालित छ।
यो add-on एक सुपर यो सम्झना छैन। एक तर्फ, हवाइजहाजको ब्रेक छ कि यो विश्वको सबैभन्दा सानो एयरपोर्टमा अवतरण गर्न सक्छ। दृष्टिकोण: १२०-११120० नटहरू। परम्परागत दृष्टिकोण प्रदर्शन नगर्नुहोस्। रनवेको अन्त्य काट्न अन्तिम पटक प्रतीक्षा गर्नुहोस् १२०-११० समुद्रीतटमा।
अर्कोतर्फ, यो हवाइजहाज यो एक धेरै उच्च गति पुग्न सक्षम छ कि यस्तो शक्ति छ। ध्वनि को पर्खाल धेरै चाँडै पुग्यो छ।
त्यहाँ रमाइलो गर्न प्रशस्त छ। राम्रो उडान!
डाउनलोड 43 149
इवान Kostic, स्टीव Hinson, यूहन्ना जे कर्नेलससुमाकर